အောင်မြင်မှု သို့မဟုတ် အဆုံးမရှိသည့် ခရီးတစ်ခု – Gentleman Magazine
[sg_popup id=”6″ event=”onload”][/sg_popup]အောင်မြင်မှု သို့မဟုတ် အဆုံးမရှိသည့် ခရီးတစ်ခု
အောငျမွငျမှု သို့မဟုတျ အဆုံးမရှိသညျ့ ခရီးတဈခု
လှနျခဲ့တဲ့ နှဈပေါငျး (၆၀)ကြျောလောကျက Edmund Hillary နဲ့ Tenzing Norgay ဆိုတဲ့ လူနှဈဦးဟာ အခွားဘယျလူသာမှာ မရောကျဖူးခဲ့တဲ့နရောကို သှားခဲ့ပါတယျ။ အဲ့ဒီနရောကတော့ ဧဝရကျတောငျထိပျဖွဈပွီး သူတို့နှဈဦးက ကမ်ဘာပထမဆုံး ဧဝရကျတောငျထိပျကို ရောကျရှိခဲ့သူတှဖွေဈလာခဲ့ပါတယျ။ တောငျထိပျကို ရောကျရှိခြိနျမှာ သူတို့ ဘယျလိုခံစားရမလဲဆိုတာကို တှေးကွညျ့နိုငျမလား။ ဂုဏျယူမှု၊ အောငျမွငျမှု၊ ဆန်ဒပွညျ့ဝမှု အမြားကွီးကို ခံစားရနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အကွာကွီးတော့ မခံစားလိုကျရပါဘူး။ တောငျထိပျရဲ့လပွေငျးဒဏျကို ဆယျ့ငါးမိနဈလောကျသာ ခံနိုငျပွီး ပွနျဆငျးလာခဲ့ကွရပါတယျ။
သငျ့ဘဝမှာလညျး အရေးအပါဆုံး အောငျမွငျမှုတဈခုကို တှေးကွညျ့ပါ။ သငျ့အတှကျ ခကျခဲပါတယျဆိုတဲ့ ကိစ်စတဈခုကို ထိပျဆုံးရောကျအောကျ လုပျနိုငျခဲ့တဲ့အတှကျ ဘယျလိုခံစားရလဲဆိုတာ အမှတျရနပေါသေးလား။ အရာအားလုံးကို အနိုငျရလိုကျသလို ခံစားရငျ ခံစားရမှာပါ။ ဒါပမေယျ့ ဒီလိုအောငျမွငျမှုကို ရရှိဖို့အတှကျ ဖွတျသနျးခဲ့ရတဲ့ အခကျအခဲတှေ၊ အတားအဆီးတှေ၊ လကျလြှော့အရှုံးပေးပွီး အခွားလှယျတာလေး တဈခုခုလုပျခငျြစိတျပျေါလာတဲ့ နရေ့ကျတှကေိုတော့ မလေို့ရနိုငျမှာ မဟုတျပါဘူး။ Hillary နဲ့ Norgay လညျး ဒီလိုပဲဖွဈမှာပါ။
လူသိမြားတဲ့ ဆိုရိုးစကားတဈခုရှိပါသေးတယျ။ အောငျမွငျမှုဆိုတာ ဘယျတော့မှ နောကျဆုံးမရှိသလို၊ ကရြှုံးမှုဆိုတာကလညျး ပြောကျဆုံးသှားမှာမဟုတျဘူး၊ အဆုံးသတျမှာ ရှဆေ့ကျဖို့ အကွောငျးရငျး ဖွဈလာတယျ ဆိုတာပါပဲ။ ကရြှုံးမှုတဈခုခုကို ရငျဆိုငျရပွီးတဲ့နောကျမှာ ရှဆေ့ကျဖို့ ခှနျအားသတ်တိရှိနဖေို့က အရေးကွီးပါတယျ။ ဒါထကျပိုအရေးကွီးတာက အောငျမွငျပွီးရငျ ရှဆေ့ကျဖို့ ခှနျအားရှိနဖေို့ ဖွဈပါတယျ။ သငျ အောငျမွငျခဲ့သမြှကို ထိုငျကွညျ့ပွီး ရှဆေ့ကျလုပျစရာတှကေို မနေ့လေို့မဖွဈပါဘူး။ အောငျမွငျမှုဆိုတာက ခရီးစဉျတဈခုဖွဈပါတယျ။ ခရီးဆုံးပနျးတိုငျမဟုတျပါဘူး။
အောငျမွငျမှုက အဖှဲ့အစညျးတဈခုလိုအပျပါတယျ။ သငျ့ကို လမျးတဈလြှောကျ အားပေးကူညီမယျ့သူတှေ မရှိပဲ တောငျတဈလုံးရဲ့ထိပျဆုံးကို တကျနိုငျမှာ မဟုတျပါဘူး။ ဒါ့ကွောငျ့ အတ်တကွီးမနဖေို့ လိုပါတယျ။ သငျ့ကို အားပေးကူညီသူတှကေို ကြေးဇူးသိတတျပါစေ။ အောငျမွငျမှုတဈခုရရှိပွီးတာနဲ့ ဂုဏျပွုတဲ့အထိမျးအမှတျတဈခုခုလုပျပါ။ ပွီးရငျ နောကျထပျရညျမှနျးခကျြပနျးတိုငျတဈခုဆီကို သှားဖို့ စတငျလုပျဆောငျပါ။
Hillary နဲ့ Norgay တို့ကလညျး စှနျ့စားရတဲ့ဘဝကို ဆကျလကျနထေိုငျသှားကွပါတယျ။ အခွားတောငျတှကေို တိုငျးတာတာ၊ တောငျတကျအဖှဲ့တှကေို ဦးဆောငျတာတှေ ဆကျလုပျကွပါတယျ။ သူတို့ ရပျတနျ့မသှားကွပါဘူး။
ဒါ့ကွောငျ့ အောငျမွငျမှုဆိုတာ ရရှိတာနဲ့ ရပျတနျ့သှားရမယျ့ ခရီးဆုံးပနျးတိုငျတဈခု မဟုတျပါဘူး။ ဆကျတိုကျလြှောကျလှမျးနရေမယျ့ ခရီးစဉျတဈခုဖွဈပါတယျ။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း (၆၀)ကျော်လောက်က Edmund Hillary နဲ့ Tenzing Norgay ဆိုတဲ့ လူနှစ်ဦးဟာ အခြားဘယ်လူသာမှာ မရောက်ဖူးခဲ့တဲ့နေရာကို သွားခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီနေရာကတော့ ဧ၀ရက်တောင်ထိပ်ဖြစ်ပြီး သူတို့နှစ်ဦးက ကမ္ဘာပထမဆုံး ဧ၀ရက်တောင်ထိပ်ကို ရောက်ရှိခဲ့သူတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ တောင်ထိပ်ကို ရောက်ရှိချိန်မှာ သူတို့ ဘယ်လိုခံစားရမလဲဆိုတာကို တွေးကြည့်နိုင်မလား။ ဂုဏ်ယူမှု၊ အောင်မြင်မှု၊ ဆန္ဒပြည့်ဝမှု အများကြီးကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အကြာကြီးတော့ မခံစားလိုက်ရပါဘူး။ တောင်ထိပ်ရဲ့လေပြင်းဒဏ်ကို ဆယ့်ငါးမိနစ်လောက်သာ ခံနိုင်ပြီး ပြန်ဆင်းလာခဲ့ကြရပါတယ်။
သင့်ဘ၀မှာလည်း အရေးအပါဆုံး အောင်မြင်မှုတစ်ခုကို တွေးကြည့်ပါ။ သင့်အတွက် ခက်ခဲပါတယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုကို ထိပ်ဆုံးရောက်အောက် လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် ဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတာ အမှတ်ရနေပါသေးလား။ အရာအားလုံးကို အနိုင်ရလိုက်သလို ခံစားရင် ခံစားရမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုအောင်မြင်မှုကို ရရှိဖို့အတွက် ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ အခက်အခဲတွေ၊ အတားအဆီးတွေ၊ လက်လျှော့အရှုံးပေးပြီး အခြားလွယ်တာလေး တစ်ခုခုလုပ်ချင်စိတ်ပေါ်လာတဲ့ နေ့ရက်တွေကိုတော့ မေ့လို့ရနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ Hillary နဲ့ Norgay လည်း ဒီလိုပဲဖြစ်မှာပါ။
လူသိများတဲ့ ဆိုရိုးစကားတစ်ခုရှိပါသေးတယ်။ အောင်မြင်မှုဆိုတာ ဘယ်တော့မှ နောက်ဆုံးမရှိသလို၊ ကျရှုံးမှုဆိုတာကလည်း ပျောက်ဆုံးသွားမှာမဟုတ်ဘူး၊ အဆုံးသတ်မှာ ရှေ့ဆက်ဖို့ အကြောင်းရင်း ဖြစ်လာတယ် ဆိုတာပါပဲ။ ကျရှုံးမှုတစ်ခုခုကို ရင်ဆိုင်ရပြီးတဲ့နောက်မှာ ရှေ့ဆက်ဖို့ ခွန်အားသတ္တိရှိနေဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါထက်ပိုအရေးကြီးတာက အောင်မြင်ပြီးရင် ရှေ့ဆက်ဖို့ ခွန်အားရှိနေဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ သင် အောင်မြင်ခဲ့သမျှကို ထိုင်ကြည့်ပြီး ရှေ့ဆက်လုပ်စရာတွေကို မေ့နေလို့မဖြစ်ပါဘူး။ အောင်မြင်မှုဆိုတာက ခရီးစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ခရီးဆုံးပန်းတိုင်မဟုတ်ပါဘူး။
အောင်မြင်မှုက အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်။ သင့်ကို လမ်းတစ်လျှောက် အားပေးကူညီမယ့်သူတွေ မရှိပဲ တောင်တစ်လုံးရဲ့ထိပ်ဆုံးကို တက်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် အတ္တကြီးမနေဖို့ လိုပါတယ်။ သင့်ကို အားပေးကူညီသူတွေကို ကျေးဇူးသိတတ်ပါစေ။ အောင်မြင်မှုတစ်ခုရရှိပြီးတာနဲ့ ဂုဏ်ပြုတဲ့အထိမ်းအမှတ်တစ်ခုခုလုပ်ပါ။ ပြီးရင် နောက်ထပ်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တစ်ခုဆီကို သွားဖို့ စတင်လုပ်ဆောင်ပါ။
Hillary နဲ့ Norgay တို့ကလည်း စွန့်စားရတဲ့ဘ၀ကို ဆက်လက်နေထိုင်သွားကြပါတယ်။ အခြားတောင်တွေကို တိုင်းတာတာ၊ တောင်တက်အဖွဲ့တွေကို ဦးဆောင်တာတွေ ဆက်လုပ်ကြပါတယ်။ သူတို့ ရပ်တန့်မသွားကြပါဘူး။
ဒါ့ကြောင့် အောင်မြင်မှုဆိုတာ ရရှိတာနဲ့ ရပ်တန့်သွားရမယ့် ခရီးဆုံးပန်းတိုင်တစ်ခု မဟုတ်ပါဘူး။ ဆက်တိုက်လျှောက်လှမ်းနေရမယ့် ခရီးစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Previous: အိပ်မက်ဆိုးများ၏ မြင်မက်ရသည့် အကြောင်းရင်းနှင့် အဓိပ္ပါယ်များ
Next: သင်…. ဘာလို့ မအောင်မြင်သေးတာလဲ ???